August 2012 - မောင်လွင်မွန်(ကသာ)
တင်ပြသူ - မောင်လွင်မွန် (ကသာ) at 2:05 AM0ခု - မှတ်ချက်ရှိသည်
- မောင်လွင်မွန်(ကသာ) -
ကဗျာတွေ အားလုံး အမှုန့်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ငါ မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသမျှ
ခြတို့က အိမ်ဖွဲ့ ထိုးဖောက်
ဘာဆို ဘာမှ မချန်
အပိုင်းအစ အမှိုက်သရိုက်ပဲ ကျန်မှ ငါ သိတော့တယ်။
ငါ တစ်ရက်ချင်း စိုက်ပျိုးခဲ့ရတဲ့ ငါ့ ဒိုင်ယာရီ ငါ့သမိုင်း
ငါ့ အမှတ်တရတွေ အားလုံး
ခြတရုန်းရုန်း ကြားမှာ ပျောက်ရှ
ကြေကွဲစရာ ညပဲလေ ..
တင်ပြသူ - မောင်လွင်မွန် (ကသာ) at 1:11 AM0ခု - မှတ်ချက်ရှိသည်
အမျိုးအစား ကဗျာ, သရဖူမဂ္ဂဇင်း
ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲကို သမိုင်း တလျှောက် ပြည်သူ လူထုတွေ ဆင်နွဲ ခဲ့ကြသည်။ ယခုတိုင်လည်း ကမ္ဘာကြီး အနှံ့ ဆင်နွှဲ နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ တိုက်ပွဲ အောင်မြင်ခြင်း ရှိသလို ဆက်လက် ဆင်နွဲ နေရခြင်း များလည်း ရှိသည်။ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ၌် အောင်ပွဲရပြီ ဆိုသောအခါ ရှုံးသွားသူ တွေက ဘယ်သူတွေ များလဲ။ သာမန် အားဖြင့် ကြည့်လျှင် အာဏာ လက်လွတ် သွားသူများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လက်ဝါးကြီး အုပ်ထား ခြင်းမှ လျှော့ပေး လိုက်ရ သူများ ရှုံးသွား သည်ဟု မြင်ကောင်း မြင်နိုင်သည်။
သို့သော် အခြား ရှုထောင့် တစ်ခုမှ ကြည့်သောအခါ သူတို့တတွေ သည်လည်း ပြည်သူ့ အစိတ်အပိုင်း အနေဖြင့် အများ နည်းတူ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး များကို တန်းတူ ရရှိ သွားမှုကို မြင်နိုင် ပါသည်။ ယခင်က အာဏာ လက်ကိုင် ရှိစဉ် အကာ အကွယ် ရရှိခဲ့မှု မှန်သမျှသည် အာဏာ လက်လွတ်ပြီ ဆိုသည်နှင့် အကြွင်းမဲ့ ဆုံးရှုံး သွားရပြီး ဥပဒေမဲ့ နှိပ်ကွပ် ခံရမှုမှ အကာ အကွယ်မဲ့ ဖြစ်သွားမလား ဟူသော သောကမျိုး ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်တွင် ပူပန်စရာ လိုမည် မဟုတ်ပေ။
“တိုက်ပွဲ” ဟု ဆိုတိုင်း အောင်နိုင်သူ ရှိသလို ရှုံးနိမ့် ပျက်သုန်း သူလည်း ရှိမည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ ဥပမာ ဆင်းရဲ နိမ့်ပါးသော ပညာမဲ့ ဘဝမှ လွတ်မြောက် ရေးအတွက် ဘဝ တိုက်ပွဲကို ဆင်နွဲရသော လူငယ် တစ်ဦးသည် ဆင်းရဲ ငတ်ပြတ် ခံပြီး အားထုတ် ကြိုးပမ်းရင်း ဘဝတိုက်ပွဲကို အောင်နိုင် သောအခါ ယခင်က မမျှော်မှန်း နိုင်ခဲ့သော ပညာတတ် တစ်ဦး၊ လူတန်းစေ့ နေနိုင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်လာမည်။ သူက တိုက်ပွဲ အနိုင်ရ သော်လည်း သူ့တိုက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်သူ မရှိပါ။ ဘဝ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သူ တစ်ဦး အနေဖြင့် နောက်ထပ် ဘဝ တိုက်ပွဲ အောင်နိုင်သူ များကိုပင် သူက ထပ်ဆင့် မွေးဖွား ပေးနိုင် ပေလိမ့်မည်။
အခြား ဥပမာ တစ်ခုကို ကြည့်ရလျှင် ၈၈ လူထု လှုပ်ရှားမှုသည် အကြွင်းမဲ့ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ သည်ဟု အချို့က ယူဆ ကြသည်။ တကယ်တော့ ရည်မှန်းသည့် အတိုင်း မပေါက်မြောက် ခဲ့နိုင် သော်လည်း ၈၈ လှုပ်ရှားမှုမှာ အသီး အပွင့် တချို့ကို ယနေ့ လူများစု ခံစား နေရ သည်သာ ဖြစ်သည်။ ၈၈ လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် တစ်ပါတီ အာဏာရှင် စနစ် ပျက်သုန်း ခဲ့သည်။ ဗဟို ချုပ်ကိုင်သော စီးပွားရေး စနစ် အစား ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ် ပေါ်လာ သည်။ ယခင်က မီးခြစ် ရေနံဆီ ဖယောင်းတိုင် ကအစ တန်းစီ ဝယ်ရသော ဘဝမှ လွတ်ကင်း သွားပြီး လွယ်လင့် တကူ ဝယ်ယူ နိုင်သော ဘဝကို ရသည်။ ပြည်သူ့ ဆိုင်၌် ဟိန်းဟောက် ခံပြီး ဝယ်ရ၊ မှောင်ခို မတန်တဆ ပေးဝယ်ရ၊ ပစ္စည်းတု များဖြင့် အလိမ် ခံရ စသော ဘဝမှ တစ်ခွန်း ဈေးဖြင့် ပစ္စည်းမှန်ကို အချိန် မရွေး ဝယ်နိုင်ခွင့်၊ ပြည်ပလုပ် ပစ္စည်းများ အလွယ် တကူ ဝယ်ခွင့်ကို ရကြသည်။ တစ်ဖက်တွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တို့ အနေဖြင့်လည်း ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရလာ ကြသည်။ ထိုသော အခါတွင် ယနေ့ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း များကို ရှေ့ဆုံးမှ ရင်းနှီး မြုပ်နှံ လုပ်ကိုင် နေသူ အများစု မှာ ၈၈ လူထု လှုပ်ရှား မှုတွင် ပါဝင် ခဲ့သူများ မဟုတ်ရုံ မက အချို့ ဆိုလျှင် ယင်း လှုပ်ရှားမှုကို ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင် ခဲ့သူများ ပါဝင် နေသည်မှာ အများ အသိ ဖြစ်ပါသည်။
တင်ပြသူ - မောင်လွင်မွန် (ကသာ) at 12:46 AM0ခု - မှတ်ချက်ရှိသည်
အမျိုးအစား ဒီလှိုင်းဂျာနယ်, ဆောင်းပါး
တစ်ဟုန်ထိုး စီးဆင်း နေသော ချောင်းရေသည် ၄င်း၏ အင်အားဖြင့် တိုက်စား ဖျော်ယူ လာသော ရွှံ့များကို သယ်ဆောင်လျက် ဆက်လက် စီးဆင်း နေပေသည်။ ချောင်း၏ နံဘေး မနီးမဝေး ၌ကား လက်ယက် တွင်းလေး တစ်တွင်း။ တွင်းလေး အနီးတွင်ကား ပုံ့ပုံ့ယုံ့ယုံ့ ထိုင်လျက် တွင်းထဲမှ ရေများကို သူ့အိုးလေး ထဲသို့ အသာ ခပ်ထည့် နေသော မိန်းကလေး တစ်ယောက် ...။
“ဪ . . . ကိုသောင်းရွှေ”
ငုံ့၍ ရေခပ်နေစဉ် ကျလာသော လူရိပ်ကြောင့် မော့ကြည့်ရင်း ရောက်လာသူကို သူက နှုတ်ဆက် လိုက်၏။
“အေး . . . ဒီနေ့တော့ နင် တစ်ယောက်တည်းနော် နှင်းဥရဲ့”
“ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်မ နုကြည်ကို ဝင်ခေါ်ဦး မလို့ဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ သူ နေမကောင်းတာ မပျောက် သေးဘူး ထင်တာနဲ့”
“အေးပါ . . . နုကြည် ကောင်းကောင်း မပျောက်သေးပါဘူး”
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သောင်းရွှေက နှင်းဥ အနားတွင် ဝင်ထိုင် လိုက်သည်။
“ဒါကြောင့်လည်း ငါ နင့်နောက်ကို လိုက်လာတာ ပေါ့ဟာ။ အရင်ဆိုရင် ငါက နင်နဲ့ စကား လွတ်လွတ် လပ်လပ် ပြောချင် ပေမယ့် နင်ရေခပ် သွားတိုင်း နုကြည်က ပါနေတော့ ငါက ငါ့နှမ တစ်ယောက်လုံး ရှေ့မှာ ဘယ်လို ပြောတော့ မလဲဟာ”
“ကျွန်မနဲ့ ဘာများ ထူးထူး ထွေထွေ ပြောစရာ ရှိသေး လို့လဲ ကိုသောင်းရွှေ”
“ရှိတာပေါ့ နှင်းဥရာ၊ နင်လည်း သိရက် သားနဲ့ နင် ငါ့ကို ပေးထားတဲ့ အဖြေကို မပြင်နိုင် တော့ဘူးလား ဟင်၊ ငါ့ကို နည်းနည်းမှ မစဉ်းစား နိုင်တော့ ဘူးလား ဟာ”
“ဪ . . . ကိုသောင်းရွှေရယ်၊ တွေ့တိုင်း ဒါကိုပဲ ပြောနေတာပဲ၊ ကျွန်မ ကိုသောင်းရွှေကို အစ်ကို တစ်ယောက် လိုပဲ ခင်နိုင်မယ်လို့ ပြောဖူးပြီပဲ၊ ပြီးတော့ ကျွန်မမှာ. . . ”
“ဘာလဲ နင်နဲ့ ထွန်းကျော်နဲ့ ကိစ္စကို ပြောဦး မလို့လား၊ ထွန်းကျော်ဟာ နင်နဲ့ ဆိုင်ချင်တော့ ဆိုင်လိမ့်မယ်၊ မပိုင် သေးဘူး မဟုတ်လား နှင်းဥ၊ ဒီတော့ ထွန်းကျော် ရှိနေပြီ ဆိုတာ နဲ့တော့ ငါက နောက်ဆုတ် မပေးနိုင်ဘူး၊ နောက်မဆုတ် နိုင်ရုံတင် မကဘူး၊ နင့်ကို မရ, ရအောင် ငါ ကြိုးစားမယ်၊ ဒီမှာ ငါပြော ဦးမယ် နှင်းဥ၊ ထွန်းကျော်ဟာ နင့်ကို လောလောဆယ် လက်မထပ် နိုင်သေး ပါဘူး၊ လက်ထပ် နိုင်တဲ့ တိုင်အောင် နင့်ကို တင့်တောင့် တင့်တယ် မထားနိုင် ပါဘူးဟာ”
“ဒါတွေ ရှင်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ကိုသောင်းရွှေရယ်”
တင်ပြသူ - မောင်လွင်မွန် (ကသာ) at 9:02 PM0ခု - မှတ်ချက်ရှိသည်
အမျိုးအစား ဝတ္ထု, ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း